အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ချစ်သူများနေ့အတွက် လက်ဆောင်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, February 06, 2011 Sunday, February 06, 2011 Labels: ဆောင်းပါး
ကဲ…….. သင်ရော ချစ်သူအတွက် ဘယ်လို လက်ဆောင်မျိုးလေး ရွေးချယ် ပြီးပြီလဲ.. ကိုယ်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကို ချစ်သူက နှစ်သက် သဘောကျမယ်၊ တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင် ပေးရတဲ့သူအတွက်အရမ်းကို ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်.. တစ်ချို့ကလဲ ကိုယ့်ချစ်သူကို လက်ဆောင်တော့ ပေးချင်ပါတယ်… ဘာပေးလို့ ပေးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာမျိုး ရှိကြပါတယ်.. ခုချိန်ထိ မစဉ်းစားရသေးသူများ ရှိနိုင်ပါ သေးတယ်.. ပြီးတော့လည်း ချစ်သူများနေ့ဆိုတာ အိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေသူများ အတွက် ကျွန်မကလဲ ၀ိုင်းကူပြီး စဉ်းစားပေးချင်ပါတယ်.. ဘာတွေ လုပ်မလဲ၊ ဘာလက်ဆောင်လေး ပေးရင်ကောင်းမလဲ.. စဉ်းစားကြည့် ရအောင်နော်….
ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားသင့်တဲ့ လက်ဆောင်လေး တစ်ခုကတော့ လက်ဝတ် ရတနာပါ… လက်ဝတ်ရတနာ ဆိုတာ သင့်ရဲ့ခံစားမှုကို ဖော်ပြလို့ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ပါတဲ့.. မင်းဟာကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရေးအကြီးဆုံး. တန်ဖိုးအထားရဆုံးသူ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဖော်ပြတဲ့ သဘောလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဖိုးတန် လက်ဝတ် ရတနာကို ပေးမယ်ဆိုရင် မချစ်ခင် မနှစ်သက်တဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူးနော်… ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ အလေးအနက် အထားဆုံး ဘ၀ရဲ့ အရေးပါဆုံး သူကိုပေးသင့်တဲ့ လက်ဆောင်လေး တစ်ခုကတော့ လက်ဝတ်ရတနာ တစ်ခုခုပါ..… လက်ဆောင် လက်ခံမဲ့ သူက ယောက်ျားလေးဆိုခဲ့ရင် လက်ပတ်နာရီလို၊ လက်စွပ်လို လက်ဆောင် မျိုးလေးတွေနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်.. လက်ဝတ် ရတနာလေး တစ်ခုခု တော့ ပေးချင်ပါရဲ့. ငွေကြေးအခြေအနေ ငဲ့ညှာနေရသေးလို့ပါ ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် နောက်တစ်မျိုး ထပ်စဉ်းစား ကြည့်စို့နော်..
ချစ်သူများနေ့မှာ လက်ဆောင် ပေးတယ်ဆိုတာ ငယ်ရွယ်သူများမှ၊ ချစ်သူ သမီးရည်းစားများ မှသာ ပေးလို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့.. မိမိ ချစ်ခင်ရတဲ့သူ ဘယ်သူ့ကိုမဆို လက်ဆောင် ပေးကြပါတယ်.. မိမိရဲ့ မိခင်၊ ဖခင်၊ မိသားစု ၊ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်၊ အချင်းချင်းလဲ လက်ဆောင် ပေးလို့ ရပါတယ်.. အိမ်ထောင်ရှင် များကလဲ ချစ်သူများနေ့ဟာ ငါတို့နဲ့ ဘာမှ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး.. လူတိုင်း၊ အသက်အရွယ် မရွေး သက်ဆိုင်ပါတယ်… မိမိရဲ့ခင်ပွန်း၊ ဇနီးတို့ကိုလဲ အမှတ်တရ လက်ဆောင် မပေးတောင်မှ မိမိအိမ်ကို ခါတိုင်းနဲ့ မတူအောင် ပြင်ဆင်ထားခြင်း၊ special dinner ပွဲလေးကို ချစ်စရာပြင်ဆင်ပြီး ၂ယောက်ထဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုလိုက် ဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူများနေ့ကို ကျင်းပနိုင်ပါတယ်.. အမျိုးသားကလဲ အိမ်အပြန်မှာ မိမိအိမ်သူသက်ထား အံ့သြ သွားအောင် ပန်းစည်း လှလှလေး၊ သို့မဟုတ် သူနှစ်သက်မဲ့ လက်ဆောင် တစ်ခုခုကို ရုတ်တရက် ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ၀မ်းမသာဘဲ နေမလဲနော်… ဒီလိုလေး လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုပြီးနွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်လာဖို့ အထောက်အကူ အများကြီး ပေးနိုင်ပါတယ်… တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးလဲ ချစ်ခင် တွယ်တာစိတ်၊ မြတ်နိုး ကြင်နာတဲ့စိတ်တွေ ပိုပြီး ရှိလာနိုင်ပါတယ်… တနည်းအားဖြင့် ငယ်မူငယ်သွေးနဲ့ လန်းဆန်းတဲ့ အချစ်တွေ ပြန်လည် ရရှိနိုင်တဲ့နည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ငွေကြေးနဲ့၊ ပြန်ရလိုက်တဲ့ ပျော်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ နှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင် ကွားခြား လှပါတယ်နော်.. ကိုယ်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကို ကိုယ်ချစ်ခင် မြတ်နိုးရသူ၊ ကိုယ့်အိမ်သူသက်ထား၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေက နှစ်သက် သဘော ကျတယ် ဆိုရင်ဘဲ ဘယ်လောက်တောင်များ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းထားပါသလဲရှင်.. ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ကို အလေးထား ဂရုစိုက်တာကို သဘောမကျဘဲ ရှိမလဲနော်.. မေတ္တာဆိုတဲ့ အရာဟာ အသွားအပြန် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ နိယာမ စကားလေးလိုပါဘဲ.. ကိုယ်က ဂရုစိုက်မှ သူကလည်း ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး ဂရုစိုက်မယ် ကြင်နာမယ် မဟုတ်ပါလားနော်.
(မနှစ်က ချစ်သူများနေ့ ရောက်ခါနီး တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ မကြာခင်ရောက်လာတော့မဲ့ ချစ်သူများနေ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးချင်သူများ၊ လူငယ်များ၊ လူကြီးများအတွက် အထောက်အကူရနိုင်အောင် ချစ်သူများနေ့ မတိုင်ခင် အချိန်နည်းနည်းစောပြီး ပြန်တင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲ ချစ်သူ အတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ကို ရွေးချယ်လို့ မိမိချစ်သူကို စိတ်ပျော်ရွှင်မှုလေး ပေးနိုင်ကြပါစေရှင်။)
29 Responses to “ချစ်သူများနေ့အတွက် လက်ဆောင်”
ရျွှေေးတော့ ကြိုက်တယ်။ သော့ချိတ်လေး
ကလည်း ချစ်စရာပေါ့။ ကိုယ်တွေတော့
အသက်ကလည်း ကြီးပါပြီအေး)
အစ်မချော... ချစ်သူများနေ့ လက်ဆောင်လေး အကြောင်း လာဖတ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပုံလေးတွေ ရှာထားတာ လှလိုက်တာ။ ရို့စ် တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ဗာလင်တိုင်းနေ့ ကျင်းပလေ့ မရှိလို့ လက်ဆောင် မပေးကြပေမယ့် မွေးနေ့တို့၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့တိုို့ဆို လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးလေ့ ရှိတယ်း)
မချောရေ ပြထားတဲ့ လက်ဆောင်တွေကတော့ သဘောကျစရာတွေချည်းပဲ။ ဗယ်လင်တိုင်း အိုင်ဒီယာတွေလဲ သဘောကျတယ်။ အဲတော့ သေချာအောင် ဘွတ်မက်တို့ထားလိုက်တယ်။
ခေါင်ရည်ဆိုလို့ မိုးကောင်းက အဒေါ်တွေ တိုက်လို့ ခေါင်ရည်သောက်လိုက်တာ နောက်တနေ့လဲကျရော ဂွမ်းပါလေရော..။ ကချင်ပုဆိုးတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ဗယ်လင်းတိုင်းနေ့မှာ မချောတစ်ယောက် မိမိချစ်တဲ့သူများနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ။
မချောက သေသေချာချာကို ရှာဖွေပြင်ဆင်ထားတာပဲ၊ Shopping mall တွေက ဗယ်လင်တိုင်းနေ့အတွက် ထားတဲ့ အကြံပေးကောင်တာတွေကိုတောင် သတိရမိ သေးတော့.. :)၊
အင်း..ကျနော်တော့ စိတ်ပုတီး လက်ဆောင်ပေးမလား လို့...၊ အဲဒီနေ့ကို ဖြစ်လာစေတဲ့ သူတော်စင် St.Valentine ကို အမှတ်ရစေဖို့လေ....။ :D (ခင်မင်ရာ ခင်မင်ကြောင်းပါဗျာ...)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ချစ်တယ် ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု ပေးချင်တယ် ... ဟီးးး ;)
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ treat လုပ်တော့မယ်။ ကောင်းဘူးလားးး :))
ခက်တာက ဂျပန်မှာ ချစ်သူများနေ့မှာ မိန်းကလေးတွေက ကောင်လေးတွေကို လက်ဆောင်ပေးကြတာပါပဲ။ ချစ်သူမှရယ်မဟုတ်ဘူး။ အထက်လူကြီးတွေကိုပေါ့..ပီးရင် မတ်၁၄ ရက် white day အဖြူရောင်နေ့မှာ အဲ့လို လက်ခံရတဲ့ လူတွေက မိန်းကလေးတွေကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုအချိန်ဆို ဆင်တူလေးတွေရောင်းနေပီ..ဒီမှာတော့... ဘာမှမရှိ..း(
သူကလဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲ့ဒီနေ့မှာ ဘုန်းကြီးဝတ်လျှက်...ဆိုတော့.. ဝေးပါပီ..လက်ဆောင်
ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ bkk မှာ shopping ထွက်ခဲ့တဲ့နေ့လေးကို လွမ်းရင်းးးးးးးးးး :(
ချစ်သူ အတွက် လက်ဆောင် ပေးဖို့ ဘာပေး ရမှန်းမသိသေးဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီထဲက လက်ဆောင်တွေထဲက လက်ဝတ်ရတနာလေးတွေကိုတော့ သဘောကျတယ် ဒါပေမယ့် မတက်နိုင်ဘူး.. ဒါကြောင့် ပန်းစည်းနဲ့ ချောကလက်ပဲ ပေးတော့မယ်။... (မှတ်ချက်။ ။လက်ခံ ယူမယ့်သူမရှိသေးလို့ ယူချင်တဲ့သူရှိရင်တော့ လက်ဝတ်ရတာနာပါ ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ လက်ဆောင်ယူမည့်သူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဟဲ..ဟဲ.. ) :) :P
ချောရေ။ ကိုယ်က ချောရဲ့ လွင်ပြင်ကလေးဆီ ပိုစ့်သစ်တိုင်းကို ရောက်ဖြစ် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မနိုင်းနဲ့ ဒီလွင်ပြင်ကလေးဆီကိုပဲ ရောက်နိုင်တာလေ။ ကိုယ်က ဖတ်မအားဘူးဆိုရင်တောင် ကော်ပီဆွဲပြီး ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ ပြန်ဖတ်တာ။ ချောပိုစ့်လေးတွေ ကောင်းနေတာတော့ပြောစရာမလိုပေဘူး။ ဒီပိုစ့်ထဲကလိုတော့ အင်းးး ဒူ့ကို ပေးရပါ့ ဟိဟိ။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတင်သွားပါတယ်။ မမအဖြူရောင်နတ်သမီးလိုတော့ မတောင်းရဲသေးပါဘူး။ ရှိမှ မရှိတော့ဘဲ။ ရဲထွန်းဇော်လိုပဲ ချစ်ချစ်က ထွက်ပြေးသွားပြီလေ ဟဟားး။ ချော ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
၁၄ ရက်မတိုင်မီ အထက်ဖော်ပြပါ လက်ဆောင်ပစ္စည်းထဲက တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ
ပန်းအိုးလေးပေးတာ သဘောအကျဆုံးပဲ အစ်မရေ... ကိုယ်ကပေးမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ...
ကဲကဲ... ဘာပဲပြောပြော ချစ်သူများနေ့လက်ဆောင်တွေကို ပိုးစိုးပက်စက် လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း အစ်မချောရဲ့ ဘလော့ကနေ ကြေငြာမောင်းခတ်လိုက်ရပါဒယ်... :P
ဒီနေ့ တစ်ပါတ်စာ ဟင်းစား ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ ယောက်ျားကို ပိုက်ဆံအိတ်ရောင်းတဲ့ ဘက်လှည့်ခေါ်သွားတယ် “ပိုက်ဆံအိတ်ဝယ်တာရွေးရခက်နေလို့ လိုက်ကြည့်ပေးပါဦး”ပေါ့။
ချစ်သူကို စိန် လက်စွပ်ဝယ်ပေးမယ် .... ရေမွှေးလည်း ၀ယ်ပေးမယ် ပန်းအိုးလေးလည်း ပေးမယ်
ချောကလက်လည်း ကျွေးမယ် လက်ဆွဲ အိတ်လေးလည်း ပေးမယ် valentine ကဒ်လေးလည်း ပေးမယ် ချစ်သူရဲ့ နဖူးလေးကိုလည်း နမ်းမယ် :D
မချောကကော ဘာပေးမလဲ... :P.. Happy Valentines day ဖြစ်ပါစေနော်...
အမရေ အားလုံးလိုချင်တယ် အမပေးနော် :P
ပထမတော့ ဖတ်တာဖတ်နေရတာ...ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး...ရင်မခုန်လိုက်ရဘူး...ချစ်သူများနေ့မှာ လက်ဆောင် ပေးတယ်ဆိုတာ ငယ်ရွယ်သူများမှ၊ ချစ်သူ သမီးရည်းစားများ မှသာ ပေးလို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့.. မိမိ ချစ်ခင်ရတဲ့သူ ဘယ်သူ့ကိုမဆို လက်ဆောင် ပေးကြပါတယ်.. မိမိရဲ့ မိခင်၊ ဖခင်၊ မိသားစု ၊ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်၊ အချင်းချင်းလဲ လက်ဆောင် ပေးလို့ ရပါတယ်...ဆိုတဲ့စာပိုဒ်ကို တွေ့လိုက်မှပဲ...အော်...အဲကျမှ...ကိုယ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကွ..ဆိုပြီး...စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်...အစတော့...စိန်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်...စဉ်းစားတာပြောပါတယ်...သေချာစဉ်းစားတော့မှ...စိန်ပန်းစည်းနဲ့ချောကလက်ပဲပေးတော့မယ်...လို့
ကျွနတ်တော်ကတော့သနပ်ခါးတုံးကြီး ထမ်းသွား
ပေးတော့ မယ်ဗျို့ ..၊ သူ့ ဖာသူ သွေးပလေ့ စေ..။
ပေးစရာတွေက အများကြီးပါလား။ အမကကော ဘာတွေပေးဖို့ စုထားပြီးပြီလဲ။းဝ
ဝယ်လို့ ရတာထက်မရတာတွေကိုပိုတန်ဖိုးထားတတ်တယ် မိုးကတော့အဲလိုး)
ဒီလိုဆိုတော့လဲ ပေးစရာရော လိုချင်တာရော များကြီးပါလားနော် .. ဒါပေမဲ့ ဝေးနေလို့..:((
အလဲ့ ဟိဟိ တော်တော်စုံအောင်ကိုဖန်တီးထားတာပဲ
အနော်ကတော့ ချစ်တူလေးကိုဘာပေးရမလဲတွေးနေထှာာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အသည်းနှလုံးပေးလိုက်ရင် ကောင်းမလား ချောကလက်ပေးရင်ကောင်းမလား နှင်းဆီပန်းပေးရင်ကောင်းမလား
တွေးမိတာပါ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ဘိုင်ကျနေတာမို့ ဘာမှပေးတော့ဝူးးးးးးးး